Cavani oo Sheegay Sababta uu Maxamed Saalax uga badeshay Maaliyada isagoon xitaa ciyaareyn!! – Gool FM
Cavani oo Sheegay Sababta uu Maxamed Saalax uga badeshay Maaliyada isagoon xitaa ciyaareyn!!
Byare June 19, 2018
(Russia) 19 Maajo 2018. Dhaliyaha xulka Uruguay Edinson Cavani ayaa daaha ka rogay sababta dhabta ah uu maaliyada ugu badashay xiddiga xulka Masar Maxamed Saalax kulankoodii furitaanka Koobka Adduunka iyadoo ay xitaa jirto inuusan kulanka ciyaarin Saalax.
Xiddiga Liverpool oo wacdaraha dhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee kooxda ka arrimisa Anfield isagoo u dhaliyay 44-gool ayaa seegay kulankiii furitaanka koobka Adduunka ee xulkiisa laga adkaaday maadaama uu qabay dhaawac Garabka ah.
Maxamed ayaa ku dhaawacmay Finalkii Champions League kaddib markii uu si xun u riday Serigo Ramos, inkastoo la sheegay inuu taam yahay misane tababare Hector Cupar ayaa go’aansday inuusan khatar galin.
Yeelkeede, midaa Cavani kama hor istaagin inuu maaliyada ka badesho Maxamed xitaa haddii uu garoonka soo gali waayay.
Sababta dhabta ah uu maaliyada ugu badashay ayuu Cavani ku sheegay:
“Waxaan maaliyada Saalax u qaatay sida hadiyad Wiilkeyga ah, kaa oo sidoo kale Maxamed Saalax u arka inuu Xiddig yahay.”.
Wiilka Dhaliyaha PSG ayaa xiddig u arka laacibka Muslimka ah ee reer Masar aabihii ayaana maaliyadiisa u soo qaaday si uu hadiyad uga dhigo.
Paris Saint-Germain oo dalab qaali ah kasoo gudbisay Cristiano Ronaldo
Manuel Neuer oo ka warbixiyay rajada uu ka leeyahay xulka Germany koobka aduunka 2018, kadib guuldaradii Mexico